Lugana, Italia: Miandry divay ao anaty elatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Lugana, Italia: Miandry divay ao anaty elatra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Lugana, miorina amin'ny faritra vinikulturie avaratra Italia, mipetraka eo amin'ny faran'ny atsimon'ny Farihy Garda. Lugana, nalaina avy tamin'ny latina Lacus Lucanus (farihy any anaty ala) dia nalaza noho ny divay, ary io faritra io koa dia manome fotoana fizahan-tany tsy mampino satria ny fitaomana ara-pinoana avy amin'ny Moyen Âge indrindra amin'ny tanànan'ny San Benedetto di Lugana, San Vigilie di Lugana ary San Martino di Lugana dia voatahiry tsara sy azo idirana.
Maninona no divay
Ny fikarohana dia milaza fa ny voa voaloboka tranainy hita tao Peschiera del Garda dia avy amin'ny voaloboka nambolena tao amin'ity faritra ity hatramin'ny vanim-potoana Bronze (na taloha). Ny divay fotsy koa dia voarakitra ao amin'ny boky nosoratan'i Andrea Bacci tamin'ny 1595, De Naturali Vinorum Historia (Momba ny Tantaran'ny divay voajanahary). Ho fanampin'izay, i Lugana no DOC voalohany nisoratra anarana tany Lombardy, ary iray amin'ireo voalohany tany Italia.
Ny DOC Lugana dia misy tanimboaloboka 2700 hektara izay miainga avy amin'ny tanàna fanjonoana sy tanàna feno trano mimanda ao Desenzano ka hatrany Peschiera, ary misy ny faritra Lonato, Pozzolengo ary Simione. Antony iray manohana ny fahombiazan'ny vatan'i Lugana ny microclimate malefaka, tsy mahazatra an'ny avaratr'i Italia satria ny toetr'andro no mahasosotra ny farihy ary na dia mafana aza ny fahavaratra dia tsy mahamay izy ireo ary malefaka ny ririnina. Ny ranomasina dia mitazona ny fanala lohataona ary misy rivotra foana mitazona ny tanimboaloboka ary mahasalama ny voaloboka mandra-pahatongan'ny fotoam-pijinjana.
Ny ampahany lehibe amin'ny tanin'ilay faritra (eo amin'ny 5,436 XNUMX hektara eo ambanin'ny voaloboka) dia eo amin'ny lemaka iva miaraka amin'ny tany matevina izay manarona fandriana môrônia misy mineraly. Ny tany mareva-doko amin'ny fiandohan'ny glacial mifamatotra amin'ny famoronana ny farihy Garda dia manome ny mineraly ny divay, ary koa ny naoty matsiro, ny faharetana ary ny firafiny.
Lugana Denominazione di Origine Controllata (DOC) dia manana divay sahabo ho 90 isan-jaton'ny famokarana manontolo, ary ny faritra ambiny dia voatondro ho famoahana Superiore na Riserva, na novokarina ho toy ny fifantenana mangirana na tara-fiotazana. Tavoahangy maherin'ny 17.5 tapitrisa no novokarina tamin'ny taona 2018 ary 70 isan-jato no naondrana tany Etazonia - tsena faha-4 lehibe indrindra an'ny antokom-pivavahana. VAKIO NY ARTICLE TRANO AO WINES.TRAVEL